Asus TUF Dash F15, Awoodda iyo Naqshadeynta ayaa is barbar socon kara | War gadget
Asus TUF Dash F15, awoodda iyo naqshadeynta way isla socon karaan
Miguel Hernández | | General, Kumbuyuutarro, Laptops, Reviews
Kombiyuutarrada loo yaqaan 'Desktop' ayaa si isa soo taraysa uga maqan desktops-ka, runtiina, xitaa kuwa ugu ciyaarta badan, dhagaystayaasha ugu waaweyn ee kombiyuutarka noocan ah, waxay u guurayaan qaabka la qaadi karo sannadihii la soo dhaafay sababo la xiriira naqshadaha cusub iyo astaamaha xoogga leh ee ay bixiyaan.
Asus Dash F15 wuxuu ku yimid miiska tijaabada, laptop-ka ciyaaraha oo leh astaamo aad u fiican iyo naqshad ka dhigaysa mid aad u saaxiibtinimo badan. Waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa laptop-kan caanka ah ee laga yaabo inaad u timid qaababkiisa laakiin inaad ku dambeyn doonto inaad u iibsato qaabkeeda, ha moogaan.
Sida munaasabado kale oo badan, ayaa dib u eegis fiidiyow oo dhameystiran xagga sare ayaa ku tusi doona unboxing iyo astaamaha ugu muhiimsan ee naqshadeynta. Ha ilaawin inaad subscribe dhigto kanaalkeena YouTube si aan usii wadno inaan idiin soo gudbino nuxurkaan xiisaha badan. Haddii aad ka heshay, waxaad ka iibsan kartaa Amazon qiimaha ugu fiican.
1 Qalabka iyo naqshadeynta: Elegance aan naxariis lahayn
2 Hardware iyo GPU waxay noo balan qaadayaan mustaqbalka
3 Isku xirnaanta dhammaan noocyada
4 Tijaabinta iyo qaboojinta
5 Multimedia iyo khibrad guud
7 Faahfaahinta qandaraasyada
Qalabka iyo naqshadeynta: Elegance aan naxariis lahayn
Haddii ay jiraan wax ii keenaya raaxo-darro kombiyuutarradaas "ciyaaraha" ah, waa khadadkooda gardarrada ah, midabkooda soo jiidashada leh iyo dhumucdooda xad-dhaafka ah. Asus-ka TUF Dash F15 ayaa intaas oo dhan qaadata oo nadiifisa, sida dheemanka oo kale. Waxaan haynaa kombiyuutar leh muuqaal milimitir 19,9 ah, oo ka sameysan isku jir bir ah iyo caagag buuxiya heerarka milateri ee MIL-STD, cimri dhererku waa arrin muhiim ah guud ahaan dhammaan alaabada ASUS tanna kama yaraan doonin.
Waxaan leenahay helitaanka laba midab, ah Dayax Madoobaadka iyo Dayax Madoobaadka (midab cad oo madow oo mugdi ah) Qaybta kore waxaan ku haynaa xarfaha TUF iyo astaanta cusub ee sumadda. Waxaan ku falanqeynay qaabka cawl madow sidaa darteed waxaan diirada saari doonaa. Labada dhinacba waxaan ku leenahay dekedo xiriir ah oo aan gadaal ka hadli doonno. Muuqaalka muuqaalka, inkasta oo uu aad u dhuuban yahay, haddana wuxuu leeyahay burr hoose. Wadarta miisaanka 2 kg, oo aan ahayn daawo, waa u fududahay waxa waaxdu bixiso.
Hardware iyo GPU waxay noo balan qaadayaan mustaqbalka
Waxaan si cad u bilaabi doonnaa waxa ugu muhiimsan, miiska qeexida ee aan ku iftiiminayno processor-ka Intel Core i7-11 370H 3,3 GHz, 4 koronto (12M khasnado, illaa 4,8 GHz). Si aan u dhaqaaqno, waxaan haysannaa Windows 10 Home oo horay loogu rakibay cusboonaysiin Windows 11 ah. Sidee bay noqon kartaa haddii kale, qaabkani waxaa weheliya laba xasuus ah 8GB 4MHz DDR3200 module, oo leh awood ugu badnaan la qiyaasi karo oo dhan ilaa 32 GB oo RAM ah.
Processor: Intel Core i7-11 370H 3,3 GHz, 4 koronto
Kaydinta cutubka la tijaabiyay waa 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD xasuusta kaas oo bixiya xawaare tijaabooyinkayaga 3400 MB / s akhris iyo 2300 MB / s qor, in ka badan oo ku filan in lagu dhaqaajiyo OS iyo ciyaaraha fiidiyowga. Waan awoodaa, haa, inaanu doorano isla cutubka awooda 1 TB.
Waxaan hada diirada saareynaa waxa muhiimka ah, NVIDIA GeForce RTX 3070 oo mas'uul ka noqon doonta qaybta garaafka isla markaana ku soo bandhigtay noocyadeeda "laptop" waxqabadka Geekbenck ee 121069 dhibcood, aad ugu dhow nooca desktop-ka ee NVIDIA GeForce RTX3070.
Isku xirnaanta dhammaan noocyada
Waxaan ku bilaabaynaa isku xirnaanta jirka, Dhinaca bidix waxaan ku leenahay dekedda awoodda lahaanshaha, dekedda Gigabit RJC45 oo dhammaystiran, HDMI 2.0b, USB 3.2 iyo USB-C Thunderbolt 4 - Power Deilvery oo uu weheliyo 3,5mm Jack. Dhanka midig waxaan u heynaa labo USB 3.2 oo caadi ah iyo Kensington keychain.
USB-C qaylo 4 PD
3,5 mm jaakad
Sida iska cad, haddii qaybta siliggu ay dhammaystiran tahay, taas USB-C wuxuu la jaan qaadayaa kormeerayaasha 4K ee 60Hz iyo culeysyo gaaraya 100W, qaybta wireless ka ma yaraan karin. Waxaan leenahay Bluetooth 5.0 iyo WiFi 6, Qeybtan ugu dambeysa ee tijaabooyinkeenna waxay soo saartay dareen is burinaya oo leh 5 GHz shabakadaha halkaasoo kala duwanaanshaha si gaar ah u xaddidan yahay iyo ping laga yaabo inaysan noqonin sidii la rabay, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho xarigga inkasta oo iswaafajinta sare.
Tijaabinta iyo qaboojinta
Kumbuyuutarku wuxuu leeyahay afar taageere, midkiiba 83 garcad, iyo nidaam qaboojiye boodh ka hortag ah. Shan tuubbo kuleyl ah guud ahaan aaladda oo dhan iyo natiijo taas oo ahayd waxa qofku ka filan karo kombiyuutarka nuucaan ah bartamaha xagaaga, kulul, aad u kulul. Si kastaba ha noqotee, ma aanan helin natiijooyin xanaaq leh ama taas oo si weyn uga duwan tartanka, sidaas darteed qaboojinta ayaa u muuqata mid ku filan.
Ka iibso Asus TUF Dash F15 Amazon
Imtixaanadayada, waxqabadka kombiyuutarka Magaalooyinka Skylines, Call of Duty Warzone iyo CS GO waxaan ku soo qaadanay sicir aad u sarreeya oo FPS ah, iyada oo aan wax dhibaato ah qabin ama kululayn. Sababo jira awgood, laptop-ka ayaa awoodi doona inuu kula dhaqmo inta badan buuggaaga xaaladaha ugu fiican ee daawashada.
Multimedia iyo khibrad guud
Kama tagi doonno adoon ka hadlin shaashadda, waxaan leenahay guddi 15,6-inji ah 16: 9 saamiga, Waan jecelahay daaweynteeda ka hortagga dhalaalka waxayna awood u leedahay inay soo bandhigto 100 ka mid ah muuqaalka 'sRGB spectrum', oo leh heer cusbooneysiin ah 120 Hz oo aan haba yaraatee u xumeyn guddiga IPS. Dabcan, dhalaalka waa la horumarin karaa, in kasta oo aynaan helin xogta saxda ah ee ku saabsan iftiinkeeda cd / m2. Dhawaaqa ayaa cad oo awood ku filan si loogu raaxeysto waxyaabaha ku jira warbaahinta badan, oo leh meel wanaagsan guud ahaan.
Ma haysano kamarad webcam ah
Kiiboodhku wuxuu leeyahay safar wanaagsan, oo u eg qaab badan oo "ciyaar" ah. Waxaan haynaa daabacado shaashad ah iyo RGB LEDs oo dhan, oo leh wadarta guud ee 1,7mm. Waa aamusantahay, waa wax la mahadiyo, oo si wanaagsan uga jawaab celiya. Si isku mid ah uma dhihi karno trackpad-ka, waxay umuuqataa mid yar oo aan macquul ahayn, laakiin dhib kuma ahan kombiyuutarkan, laakiin wuxuu kudhowaad yahay dhammaan kuwa Apple uusan soo saarin. Ma lihin wax yar oo aan uga hadalno madax-bannaanida, waxay in badan ku xirnaan doontaa shuruudaha ciyaarta, in ka badan laba saacadood, waxaan kugula talineynaa inaad u adeegsato isku xirnaan.
Laptop-kan qayb ka mid ah 1.299 ee loogu talagalay nooca gelitaankeeda, illaa 1.699 euro nooca aan tijaabinay, bedel aad u xiiso badan oo ku saabsan aaladaha aan ka heleyno suuqa sababo la xiriira qaabeyntiisa iyo awooddeeda.
Naqshad cusub iyo qalab sifiican loo dhammeeyay
Qalabka si uu ula jaan qaado mustaqbal rajo leh
Dareen wanaagsan oo adeegsi iyo isku xirnaan
Waxaa kujira adabtarada A / C halkii laga isticmaali lahaa USB-C
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Asus TUF Dash F15, awoodda iyo naqshadeynta way isla socon karaan
SoloCam E20, oo ah kamarad banaanka aad u kala duwan oo ka socota Eufy [Dib u eegis]